Shiinaha 5T warshad mashiinka barafka jaban iyo alaableyda | Nidaamka Barafka ee Herbin
Mashiinka barafka jaban ee 5T / maalin si loo sameeyo 5 tan oo baraf ah maalin kasta, 24 saacadood gudahood.
Waxaan bixinaa mashiinka barafka jaban ee 5T / maalin. Tayo sare leh oo leh dammaanad 2 sano ah. Waxaan nafteena u hibeynay mashiinnada barafka jajaban tan iyo 2009, mashiinadeenuna waxay daboolayaan inta badan suuqyada Yurub iyo Mareykanka Waxaan rajeyneynaa inaan kuugu adeegno tikniyoolajiyadeena barafka jilicsan ee xasiloon.
1. Baraf ay sameeyeen mashiinkeena barafka jajaban ee 5T / maalin.
Jajabka barafka ee ay sameeyeen mashiinadeena barafka jajaban ayaa sifiican loogu qaboojiyey waxqabadka qaboojinta ugu fiican. Jajabyada barafka waa kuwo qaro weyn oo qalalan.
Qiyaastii 5 tan oo ah noocyo baraf oo tayo sare leh ayaa maalin kasta lagu samayn karaa 24 saacadood gudahood, iyo in barafka wax soo saarkiisu maalin walba uu ku saleysan yahay 30C heerkulka deegaanka, 20C heerkulka biyaha ee gudaha.
Baaxadda barafka ayaa u dhexeeya 1.5-2.3mm. Oo dhumucdiisuna waxay barafka waa la hagaajin karo.
Noocyada barafka ee noocan oo kale ah ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa qaboojinta kalluunka, ka dhigista cuntada mid cusub, ka shaqeynta cuntada, qaboojinta shubka, dusha sare ee kalluunka, isticmaalka kiimikada iyo wixii la mid ah.
Iyaga waxaa sameeya mashiinnada barafka ee tamarta badbaadiya ee Cagaaran, iyo isticmaalka awoodda samaynta 1 tan oo kasta oo jajab ah barafku waa 75KWH oo keliya.
2. Faahfaahin ka mid ah 5T / maalin mashiinka barafka flake.
Awoodeena mashiinka barafka jajaban ee 5T / maalin waxay ku saleysan tahay heerkulka 30C iyo heerkulka biyaha ee 20C. Xaaladdaas heerka shaqadeed, waxay samayn kartaa qiyaastii 5 tan oo baraf ah maalin kasta, 24 saacadood gudahood.
Waxay ku qalabeysan tahay uumi-baxaha dawada loo yaqaan 'Silver alloy evaporator', oo leh kuleylka kuleylka ugu fiican. Is-weydaarsiga kuleylka ee u dhexeeya biyaha iyo qaboojiyaha si hufan ayaa loo samayn karaa. Sababtaas awgeed, mashiinkan barafka ee 5T / maalin wuxuu cunaa kaliya 375KWH koronto si loo sameeyo 5 tan oo jajab baraf ah. Mashiinka kale ee Shiinaha ee 5T / maalin flake flake wuxuu cunaa ugu yaraan 525 KW koronto si loo sameeyo 5 tan oo baraf ah. Farqiga isticmaalka korontada maalin walba waa 150KWH.
10 sano gudahood, farqiga wuxuu noqon doonaa 547500 KW koronto. Waxaan ku xisaabineynaa adoo adeegsanaya 150x365x10 = 547500.
Xulo mashiinkeyga barafka jaban ee 5T / maalin, waxaad bixin doontaa wax aad uga yar biilka korantada adiga oo keydin doona 547500 KWH koronto 10 sano gudahood.
80% waxyaabaha ka kooban mishiinka barafka ee 5T / maalin waa calaamado caan ah oo caalami ah. Wixii kombaresaradayaasha, waxaan ka dhex xulanaa Bitzer, GEA Bock, Frascold, Refcomp, iyo wixii la mid ah. Maraakiibta cadaadiska, sida kala-soocida saliida, dareeraha dareeraha iyo wixii la mid ah, waxaan u xushaynaa Emerson ama O&F, kuwaas oo ah kuwa ugu caansan uguna ballaaran ee loo isticmaalo nidaamyada qaboojinta tayada sare leh. Dhanka kale, Danfoss valves, taageerayaasha Ziehl-Abegg, qeybaha korantada Schneider, iyo wixii la mid ah ayaa loo isticmaalaa mashiinadeena barafka ee 5T / maalin.
Waa kuwan qaar ka mid ah sawirrada qaybaha qaarkood iyo faahfaahinta mashiinkeenna barafka dabacsan ee 5T / maalin.
3. Halbeegga ka mid ah 5T / maalin mashiinka barafka flake.
1 Halbeegyada Noocyada
2 Heerkulka heerkulka caadiga ah 30 ℃
3 Heerkulka biyaha ee caadiga ah 20 ℃
4 Kheyraadka biyaha Biyo macaan
5 Koronto 400V / 4P / 50Hz
6 Xaaladda shaqada Hawo wanaagsan
8 Qaboojiyaha R404a
9 Baraf maalin wax soo saar leh 5 tan oo baraf ah 24 saac gudahood
10 Awoodda qaboojiyaha 25.3KW
11 Uumiga heerkulka Kajar 18 ℃ - Ka goynta 20 ℃
12 Flake heerkulka barafka Hoos -5 ℃
13 Dhumucda barafka Flake 1.8-2.2mm
14 Awood u isticmaalidda sameynta barafka 75KWH sameynta 1 tan oo jajab ah baraf
15 Buuq 78dBA 2 mitir gudahood
16 Awoodda socodka mishiinka oo dhameystiran 15.625KW Awood badbaadin !!!
18 Mashiinka taarikada qaboojinta biyaha iyo matoorka marawaxadaha 1.5 + 0.55 = 2.05KW
19 Awoodda isweydaarsiga kuleylka ee biyaha 100KW
20 Yaraynta baraf jarista ee uumi bixiyaha 0.55KW
21 Bamka wareegga biyaha ee uumiyaha 0.12KW
22 Nidaamka xakamaynta Barnaamijka xakamaynta PLC
23 Cufnaanta jilicsan ee barafka 900 ~ 950kg / m3
24 Miisaanka mashiinka barafka jaban 1500kgs
25 Qiyaasta mashiinka barafka jajaban LxWxH = 2300x1900x1800mm
26 Qaar kale ......
4. Sawirka sawirka 5T / maalin ee barafka flake.
Macaamiil badan ayaa jeclaan lahaa inay doortaan mashiinka barafka ee 5T / maalin oo la shaqeeya hal qol oo baraf ah 3T. Taasi sidoo kale waa heerkeenna 5T / maalin warshad baraf flake ah.
Mashiinka barafka jilicsan ee 5T / maalin wuxuu ku yaalaa meel ka sareysa qolka barafka ee 3T.
Qolka barafku wuxuu ka samaysan yahay alwaax dahaaran oo kuleylkiisu dhan yahay 100mm, barafka baraf ahna waa lagu hayn karaa gudaha iyada oo aan dhalaalin muddo dheer. Qaboobaha barafka ayaa si otomaatig ah ugu dhacaya qolka barafka.
Qolka barafka ee 3T wuxuu keydin karaa 3 tan oo jalaato baraf ah, intaasna wey kufilan tahay in lagu keydiyo dhamaan barafyada barafka lagu sameeyo waqtiga habeenkii mashiinka barafka ee 5T / maalin.
Sawirkaas, waxaad ku arki kartaa munaarad qaboojinta biyaha oo dhinac ah mashiinka barafka. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sii daayo kuleylka jawiga nidaamka barafka. Taawarka qaboojinta biyaha waxaa lagu taliyay inuu ku yaalo meel banaan ah, sida sare ee dhismaha, banaanka xarunta iyo wixii la mid ah. Biyaha la qaboojiyey ee loogu talagalay ayaa si xoog leh loogu talinayaa inay ka shaqeeyaan meelaha kulul.
Cabirka qolka barafka waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Kondenser qaboojiyaha biyaha agtiisa, waxaan sidoo kale ku qalabeyn karnaa mashiinka hawo qaboojiyaha hawada + taageerayaasha qaboojinta hawada. Waxaanna u qaabeyn doonnaa nidaamka iyadoo la raacayo heerkulka ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya ee isticmaalaha.
5. Mustaqbalka badeecada iyo isticmaalka mashiinka barafka ee 5T / maalin.
Dhir baraf ah oo qallalan oo si fiican loo qaboojiyey oo leh qaboojin fiican. Barafleyda waxaa loo isticmaali karaa in lagu keydsho cuntada badda, in cuntada laga dhigo mid cusub, ka shaqeynta cuntada, qaboojinta la taaban karo, dusha sare ee kalluunka, isticmaalka kiimikada iyo wixii la mid ah.
6. Bixinta, rarka, adeegga iyo dammaanadda mashiinka barafka ee 5T / maalin.
Hal weel oo 20 fuud ah ayaa ka badan inta ku filan hal warshad baraf oo dhammaystiran 5T / maalin, oo ay ku jiraan mashiinka barafka ee 5T / maalin, qolka barafka, birta birta si ay u taageerto mashiinka barafka iyo wiilka.
Waxaan ku bixinaa adeegga la-talinta khadka tooska ah oo bilaash ah mashiinka noloshiisa muddada dheer. Waxaan ku siineynaa qaybo bilaash ah DHL haddii qalabka mashiinka uu leeyahay dhibaato tayo leh oo ku jirta dammaanad.
Dammaanadda uumiyaha barafka jaban ayaa ah 20 sano, waxaan u ballanqaadeynaa uumi-bixiyuhu inuusan lahayn wax gaas ah oo daadanaya, cilladna aysan lahayn 20 sano gudahood.
3 sano ayaa loogu talagalay damaanad qaadka Motors, bambooyin, beesho, marawaxado, qeybaha korantada iyo qeybaha kale ee dhaqaaqa.
15 sano waa dammaanad qaada maraakiibta cadaadiska, kondenser, kombaresarada, filtarka iyo wixii la mid ah.
7. Su'aalaha la isweydiiyo oo ku saabsan mashiinka barafka ee 5T / maalin.
S: Waa intee 5T / maalintii dhirta barafka flake?
J: Qiimaha dhirta barafka ee 5T / maalin waa inta udhaxeysa USD 13500 iyo USD 20000.
Qiimuhu wuxuu kuxiranyahay liiska mashiinka iyo cabirka qolka barafka. Qiimayaashu waxay ku saleysan yihiin FOB SHENZHEN USD, mana ku jiraan qiimaha xamuulka. Macaamiilku waa inuu isagu iska bixiyaa xamuulka.
S: Waa maxay farqiga u dhexeeya mashiinkeenna barafka jaban iyo mashiinka kale ee shiinaha ee jilicsan?
J: Farqiga ugu weyni waa farsamadeenna keydinta awoodda.
Waxaan u adeegsaneynaa daawaha loo yaqaan 'Chromed sliver alloy' si aan ugu sameyno uumi bixiye sida ugu fiican uguna waxtarka badan kuleylka.
Isla xaaladaas shaqo, mishiinkeyga 5T / day flake mashiinka wuxuu cunaa 375KWH oo koronto ah maalin walba, halka mashiinada kale ee shiilan ee shiinaha ay cunaan uguyaraan 525KWH maalin kasta.
Maalin kasta, faraqa waa 150KWH koronto.
10 sano gudahood, faraqa waa 547,500 KW koronto.
20 sano gudahood, faraqa waa 1,095,000 KW koronto.
Qiimahaaga ugu weyn ee waxsoosaarka samaynta barafku waa koronto. Furaha ganacsiga barafka guul iyo faa'iido waa farsamada keydinta mashiinka.
Tikniyoolajiyadeyda keydinta awoodda, waxaad ku ballaarin kartaa faa'iidadaada barafka adoo bixinaya biilka korontada oo yar.
Tikniyoolajiyadeyda awood-badbaadinta, waxaad ku iibin kartaa barafka qiimo ka hooseeya kuwa kula tartamaya, waxaadna dhawaan ka saari kartaa tartamayaashaada suuqa.
Waxaa intaa dheer, waxaan haynaa qalab dheeri ah oo kaa caawinaya inaad keydiso koronto.
Aynu ugu yeerno awood badbaadiye. Mowjadaha korantada ee aan waxtar lahayn / aan shaqeynin waxaa lagu sifeyn karaa keydiyaha korontada, sidaas darteed, waxay hoos u dhigi kartaa dhammaan isticmaalka tamarta nidaamka 5% -8%.
Qiimaha keydiyaha korontadu wuxuu ka bilaabmayaa USD 3000 / set, waxayna kuxirantahay wadarta awooda rakibtay ee nidaamka.
USD 3000 waa qiimaha keydiyaha tamarta barafka flat 5T / maalin.
10T / maalin mashiinka barafka flake
15T / maalin mashiinka barafka flake
20T / maalin mashiinka barafka flake
25T / maalin mashiinka barafka flake
30T / maalin mashiinka barafka flake
Mashiinnada barafka ee waaweyn
Hore: 0.6T mishiinka barafka
Xiga: 30T mashiinka barafka flake
2T mashiinka barafka flake